Qolka Lebbiska Ee Uu Ka Dhex Ooyey, Difaacii Uu Ka Ciyaaray
By axadle Last updated Jun 1, 2020
Miyaad hore ula socotay in Mohamed Salah uu ka ciyaari jiray difaaca markii uu da’yarta ahaa? Miyaad se haysay xogta qofka sababta ugu ahaa inuu booskaas beddelo oo uu weerarka yimaaddo?
Arsenal Oo Jug Culus Gaadhsiisay Liverpool, Arteta Oo Farxad
Qiimaynta Ciyaartoyda Kulankii Man City & Bournemouth –
Xiddiga Liverpool ee Mohamed Salah ayaa lasoo bandhigay xaqiiqada booskii uu ka ciyaari jiray markii uu da’yarta ahaa ee uu ciyaaraha ku cusbaa, ka hor intii aanu noqonin laacibka ay dunidu taqaano ee goolasha badan dhaliya, isla markaana qaybta weyn kasoo qaatay guushii Champions League ay Liverpool ka gaadhay labadii xili ciyaareed ee ugu dambeeyey iyo hanashada Premier League ee ay kaabiga u saaran tahay.
Mohamed Salah oo ay da’diisu yarayd, ayaa ka mid noqday kooxda El Mokawloon FC oo uu kulliyadeeda magaalada Qaahira ku biiray, isaga oo markaas ka ciyaarayay difaaca, laakiin El Shishiny oo ahaa tababarihii kooxdaas yaryarka ahayd ee kulliyadda ku carbinayay, ayaa waxa uu si fiican u daraaseeyey halka uu Mohamed Salah ku fiican yahay inuu ka ciyaaro.
Salah waxa uu markaas ka dheelayay booska baasha bidix ee difaaca, waxaana uu El Shishiny geeyey garabka weerarka ee dhinaca bidixda, halkaas oo markiiba uu ku muujiyey awoodda uu u leeyahay inuu isku muujiyo booskaas.
Tijaabada uu sameeyey Eel Shishiny waxay nqootay mid guuleysatay, waxaanu markiiba Mohamed Salah muujiyey inuu leeyahay tayo dhinaca weerarka ah oo uu kaga wanaagsan yahay hab-difaaca.
Mohamed Salah oo ku noolaa tuulada Nagrig oo duleedka Qaahir ku taalla, waxa uu maalin kasta geli jiray safar afar saacadood ah oo uu ku tegayay kooxdiisa El Mokawloon si uu tababarka ugula soo qaato, waxaanu nasiib wanaag gacantiisa galay El Shishiny oo ka caawiyey inuu noqdo ciyaartoyga uu maanta yahay, waxaanu horyaalka waddanka Masar ee Egyptian Premier League uu kulankiisii ugu horreeyey saftay isaga oo 17 jir ah sannadkii 2010.
Buug uu qoray tababare El Shishiny ayaa waxa uu tuducyo ka mid ah kusoo qaatay sidii uu Mohamed Salah uga dhigay ciyaartoyga maanta la garanayo ee wacdaraha ka dhigaya horyaalka Premier League iyo tartanka Champions League.
“Tababareyaal badan ayaa sheegan doona inay caan ka dhigeen laakiin waxaan ogahay inay aniga i hoos imanayaan.” Ayuu buuggiisa ku yidhi El Shishiny, sida uu soo xigtay wargeyska The Impartial.
Salah oo da’yar oo orodka dheeraynaya ayaa heerka koowaad yimid, waxaanu markiiba xiiseeyey Al Ahly iyo Zamalek, laakiin umay suurtogelin inuu ku biiro labada kooxood ee ugu awoodda badan Masar.
El Shishiny waxa uu sheegay in xiddiga Liverpool aanu ku fiicnayn booska difaaca bidix, halkaas oo ay joogeen afar ciyaartoy oo kale oo uu isagu booska kasii sugayay, sidaana uu ku go’aansaday inuu ku tijaabiyo weerarka oo uu isku muujiyey.
“Aniga ayaa ku taliyey in la geeyo kooxda koowaad ee El Mokawloon. Mohamed Wuxuu markaas ka ciyaarayay difaaca bidix ee kooxdayda, laakiin waxaan ku fikiray inuu kaga fiicnaanayo weerarka. Waqtigaas, muu ahayn ciyaartoyga ugu mudan booska bidixda fifaaca, waxaananu haysanay afar ciyaartoy oo kale oo uu isagu booska kasii sugayay, sidaa darteed ayaan go’aansaday inaan ku tijaabiyo meel kale, waxaanan geeyey dhinaca midig ee weerarka.” Ayuu yidhi El Shishiny.
“Mar walba wuuu orod badnaa, waxaanu helayay booska ugu wanaagsan xattaa haddii uu lumiyo fursadaha qaarkood.” Ayuu raaciyey tababaruhu.
El Shishiny waxa kale oo uu soo bandhigay sida uu Mohamed Salah hammuunta ugu qabay gool-dhalinta, taas oo ah astaan illaa hadda kasoo muuqata oo aanu jeclayn inuu kubadda dhiibo marka uu goolka ku dhow yahay.
“Waxa jirtay ciyaar aanu la dheelnay ENNPI oo aanu kaga guuleysanay 4-0, waxaanu Mohamed helay saddex fursadood oo uu goolal ku dhalin karayay, laakiin mid walba wuu khasaariyey. Ciyaarta kaddib, waxaan ugu tegay qolka tababaraha isaga oo ooyaya, waxaan weydiiyey isaga, ‘Maxaad la ooyeysaa?’ wuxuu igu yidhi ‘Sababtoo ah maanta gool maan dhalinin.’” Ayuu yidhi tababaruhu.
Isaga oo hadalkiisa sii wata, waxa uu El Shishiny yidhi: “Qof kasta oo kale oo kooxda wuu faraxsanaa sababtoo ah guusha laakiin isagu wuu murugaysnaa. Waxaan u sheegay, ‘Ha werwerin, adiga ayaa xili ciyaareedka dambe noqon doona laacibka ugu goolasha badan.’ Wuxuuna ku dhamaystay 30 gool.”
Laba sannadood oo uu u ciyaaray El Mokawloon kaddib, Salah waxa uu u dhaqaaqay qaaradda Yurub oo uu ku biiray kooxda FC Basel ee reer Switzerland oo uu uga sii gudbay Chelsea, Fiorentina iyo AS Roma ka hor intii aanu Liverpool tegin oo uu sannadkiisii saddexaad ku qaadanayo.
axadle 3261 posts
Best US infectious sicknesses professional Fauci calls…
Russian police detain over 140 anti-Putin protesters in…
Combat over US Huawei sanctions accentuate China’s…
Manchester City Oo Guul Cidhiidhi Ah Ka Gaadhay…
Prev Next 1 of 1,987